Infographic: Ntuziaka nke Nchọpụta nsogbu Isiokwu nnyefe Email | Martech Zone
Mgbe ozi ịntanetị tozuru ya, ọ nwere ike ịkpata ọtụtụ ọgba aghara. Ọ dị mkpa ịbanye na ala ya - ngwa ngwa!
Ihe mbụ anyị kwesịrị ịmalite bụ ịghọta ihe niile na-abanye na ịnweta email gị na igbe mbata… nke a gụnyere ịdị ọcha data gị, aha IP gị, nhazi DNS gị (SPF na DKIM), ọdịnaya gị, na ihe ọ bụla na-akọ na email gị dị ka spam.
Nke a bụ ozi infographic na-enye nkọwa siri ike etu esi email sitere na okike wee banye igbe. Ihe ndị e mere ka ọ pụta ìhè bụ ihe metụtara na o nwere ike ịbụ na e zigara email gị na igbe mbata onye debanyere aha:
Nchọpụta nsogbu ibiaghachi Issues
Iji jide n'aka na ị nwere ike idozi ma dozie nsogbu na nnyefe ozi ịntanetị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, nke a bụ usoro kwụ ọtọ site na usoro nnabata iji dozie nsogbu ibiaghachi.
Nzọụkwụ 1: Nyochaa faịlụ Email gị ma ọ bụ Database maka Bounce Codes
Lelee nchekwa data maka onye ahịa email nke bounced ọtụtụ. Lelee koodu ibiaghachi wee hụ ma ọ bido na 550 bounce koodu. Ọ bụrụ otu a, a spam nzacha bụ nsogbu gị. Kingrịọ ndị nnata ka ịgbakwunye adreesị ozi-e na kọntaktị ha nwere ike idozi nke a. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, gaa nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Lelee SPF, DKIM na DMARC Nhazi, Ntọala DNS na atumatu
Nke a bụ nzọụkwụ gị ọzọ ma ịchọtara koodu nkwụghachi 550 ma ọ bụ na ị chọtaghị. Dị iche iche software dị inyere gị aka mezue a nzọụkwụ:
MXToolbox Google Lelee MX DKIM Nkwado
Mgbe emeghị usoro ndị a n'ụzọ ziri ezi, ọ nwere ike ibute nsogbu ị nwere ike ịnweta. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịchọpụta ntọala ndị a site na ịgụ site na data nkesa email gị - ha na-egosi gị ma onye mbido gafere ego ndị a.
Nzọụkwụ 3: Lelee Nkọwa IP / Sender Score gị
Ọ bụrụ na esemokwu ahụ adịgide, enwere ike inwe nsogbu na Aha adreesị IP ma ọ bụ onye nzipu ozi. Returnzọ nlọghachi (nke ndozi ya bara uru) sọftụwia na - enye gị ohere ịlele akara onye na - ezipụ IP. Ọ bụrụ na akara adịghị agbanwe agbanwe nke a ga-enye gị nghọta ụfọdụ banyere ihe kpatara nsogbu ahụ. Sọftụwia a nwekwara ike inyere gị aka ịmata ụzọ iji melite ịga n’ihu.
Nzọụkwụ 4: Lelee Ma Adreesị IP gị ọ bụ Blacklisted
Enwere ọrụ ndị ọzọ na ISPs na sava mgbanwe ozi na-akwado iji hụ ma ha ga-eziga email gị na igbe mbata ndị ahịa ha. Amgha bụru ndu-ishi-ozi. Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịnye nyocha nyocha na ị nwere mmekọrịta azụmahịa na onye debanyere aha gị nke kọọrọ gị dị ka SPAM ma ọ bụ ndekọ opt-in, ha ga-ewepụ gị na ndepụta ojii ọ bụla.
Kwụpụ 5: Lelee Ọdịnaya Gị
Ndị na-ahụ maka ịntanetị na ndị ahịa email na-eleba anya n'okwu dị na email gị iji chọpụta na ọ bụ SPAM. Nanị ikwu “Free” n'isiokwu ma ọ bụ ọtụtụ oge na ọdịnaya gị niile nwere ike ibuga email gị ozugbo na folda Junk. Imirikiti ndị na-enye ọrụ Email ga-enyere gị aka ịdebanye ọdịnaya gị ma wepu okwu nwere ike ịdaba gị na nsogbu.
Nzọụkwụ 6: Kpọtụrụ Onye na-enye Internetntanetị Ihe Nye Ihe
Ọ bụrụ na onye zitere akara abụghị nsogbu, ọ nwere ike ịdị mkpa ịkpọtụrụ onye na-ezitere gị email nke ịchọtara na nke mbụ. Okwu mgbapụta nwere ike ime na nnukwu ndị na-enye ọrụ dịka Gmail, Microsoft, BigPond na Optus. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọpụta onye ahịa ka ọ bụrụ adreesị ozi-e gọọmentị, ọ kachasị mma ileghara okwu a anya n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ahụ dị mkpa ozugbo.
Jụọ ndị na-enye ọrụ email ahụ (Microsoft, Google, Telstra, Optus) ka ha debanye aha na adreesị IP. Nke a kwesịrị igbochi nsogbu ahụ ịme ọzọ. Jide n'aka na SPF, DKIM, na DMARC ziri ezi tupu ị kpọtụrụ ndị na-enye ọrụ - nke a ga-abụ ajụjụ mbụ ha. Ga - egosi na edobere usoro ndị a n'ụzọ ziri ezi tupu ha emee ihe ọ bụla.
MARA: Na Junk nchekwa bụ E nyere ya
Buru n'uche na ibiaghachi pụtara na ọrụ nnata jụrụ email wee zaghachi na koodu ahụ. Email nke anaputara (250 ok koodu) ka nwere ike zigara a Nchekwa JunkIhe ị ka nwere ike dozie. Ọ bụrụ na ị na-eziga ọtụtụ narị puku… ma ọ bụ ọtụtụ nde ozi, ị ka ga-achọ iji ihe igbe ntinye ederede iji dozie nsogbu ma ozi ịntanetị gị na-aga na igbe mbata ma ọ bụ na folda junk.
Throughrụ ọrụ site na usoro ndị a kwesịrị inyere gị aka idozi ọtụtụ nsogbu izipu ozi na-enweghị nsogbu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmechaa usoro ndị a mana okwu ahụ ka dị, enyemaka dị nso - kpọtụrụ ndị otu anyị maka nkwado.
Dabere na usoro a dị n'elu site na ntuziaka, anyị enyerela ọtụtụ ndị ahịa aka idozi nsogbu ha na-eweta nsogbu ha. Dịka ọmụmaatụ, maka otu ụlọ akụ na Australia, anyị gbasoro usoro ndị a dị elu iji mee ka nnweta sitere na 80% gaa 95% na ọnwa 2.
Tags: 250ok550 ibiaghachinwa ojiiibiaghachi ozi ịntanetịclicknnapụtadkimDMARCozi nnapụta emailozi ịza ozi emailibiaghachi siri ikeotú email si arụ ọrụkaa dị ka ihe nzuzukaa dị ka ihe na-abaghị uruakụkọ spamAmghaspfnchọpụta nsogbu email deliverabilitywepu aha